နှုတ်ခေါင်းကို အာခေါင်နဲ့ထိပြီး အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၏ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများ | Moe Naymin
သင်က ညဘက်အလွယ်တကူ အိပ်မပျော်ဘူး။ ညဘက်ခဏခဏ အိပ်ရေးပျက်လျှင် သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ အတွေးလွန်ခြင်းများက သင်၏ ညဘက်အိပ်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်၏အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ဦးနှောက်၏ စွမ်းရည်များကို သိသိသာသာတိုးတတ်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို Dr. Andrew Weill က တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 478 ဟုခေါ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လေးစက္ကန့်ကြာအောင် အသက်ရှုသွင်းပါ။ ပြီးလျှင် အသက်မရှုထုတ်ပဲ ၇ စက္ကန့်အောင့်ထားပါ။ ထိုသို့အသက်အောင့်နေစဉ်တွင် လျှာနှင့်အာခေါင် ထိထားပါ။ ၇ စက္ကန့်ပြီးလျှင် ပါးစပ်မှလေကို မှုတ်ထုတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ၈ စက္ကန့်ခန့် ပုံမှန်အသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်ပြုလုပ်ပြီး ခဏနားပါ။ ထို့နောက် လေးစက္ကန့်ကြာအောင် အသက်ရှုသွင်းပါ။ ၇ စက္ကန့်အသက်မရှုပဲ လျှာနှင့်အာခေါင်ထိထားပါ။ ပြီးလျှင်မှုတ်ထုတ်ပါ။ ၈ စက္ကန့်ပုံမှန်အတိုင်း လေရှုပြီးနားပါ။ ထိုသို့ လေ့ကျင့်ခန်းကို လေးကြိမ် ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပါ။ လေးကြိမ်ထက် ပိုမလုပ်ရပါ။ တစ်နေ့လျှင် မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ ပြုလုပ်ပေးပါ။
If you aren't getting enough sleep at night, chances are other areas of your life are takingahit too.Many people haveadifficult time falling asleep at night. Whether you're stressed about work, bills or family or your body just won't shut down or cannot fall asleep at night, you may be able to get some relief with this breathing technique. This will not only improve your sleeping habits but also can improve your brain and memory function.
One scientist -Dr Andrew Weill- claims he hasaway of getting insomniacs to slip intoaslumber in just 60 seconds – and it doesn't involve prescription drugs or strange lighting.Dubbed the 4-7-8 breathing technique, the method is described asa'natural tranquilizer for the nervous system' helping to reduce tension in the body to relax.
breather quiet for breathin for4sec hold breath7and then blow and then rest for 8 seconds. repeat for4cycle, twice foraday.
Never more than4breath cycle.